Pellets Fatịlaịza Pellets jụrụ igwe na-eweta igwe na ụlọ ọrụ | YiZheng
Gịnị bụ Fatịlaịza Pellets Jụrụ igwe?
Na Fatịlaịza Pellets Jụrụ igwe Ezubere iji belata mmetọ nke ikuku oyi ma melite gburugburu ọrụ. Iji igwe eji eji eji igwe eme ihe bụ ka usoro fatịlaịza fatịlaịza bekee dị mkpụmkpụ. Dakọtara na ihicha igwe nwere ike ukwuu melite obi jụrụ ọnụego, ọ bụghị naanị belata oru osisi ike, kamakwa n'ihu wepu ụfọdụ mmiri ma belata okpomọkụ nke fatịlaịza nsogbu dị iche iche. Na rotary oyi igwe enwekwara ike iji ya mee ihe maka ihe ndị ọzọ na-eme ntụ na ihe ndị ọzọ. Ngwaọrụ ahụ nwere kọmpat, arụmọrụ dị elu, arụmọrụ kwesịrị ntụkwasị obi yana ike mgbanwe.
Ọrụ cikpụrụ nke Fatịlaịza Pellets Igwe Igwe Nri
Fatịlaịza Pellets Jụrụ igwe adopts kpo oku usoro iji ajụkwa ihe. A kwadebere ya na nku mkpuchi welded nchara welded n'ihu tube ahụ na ibuli efere na njedebe nke cylinder ahụ, a ga-etinyerịrị sistemụ ọkpọkọ inyeaka yana igwe jụrụ oyi. Dị ka cylinder na-agbagharị oge niile, efere na-ebuli elu na-aga n'ihu na-ebuli granulu fatịlaịza na ala iji mee ka ikuku oyi dị na kọntaktị ahụ. A ga-eme ka fatịlaịza granular gbadata na 40 Celsius C tupu ahapụ ya.
Atụmatụ nke Fatịlaịza Pellets Igwe Igwe
1.Cilinder nke Fatịlaịza Pellets Jụrụ Igwebụ 14mm oké integral kpụrụ gburugburu tube, nke nwere uru nke elu concentricity na ike ọrụ nke ígwè. Obosara nke eweli efere bụ 5mm.
2. The mgbanaka gia, ala na idler na mgbodo niile nchara oge ọgbụgba.
3. Họrọ ezi uche na-arụ ọrụ parameters iji dozie “nri na ifufe”, si otú ukwuu na-eme ka e si agbanweta arụmọrụ nke Fatịlaịza Pellets Jụrụ igwe ma belata oriri ike site na 30-50%.
4. The cylinder adopts gburugburu tube, na ígwè mmepụta ihe na-eji otu efere na-weld n'ime a bobbin iji gbochie deformation na mgbe e mesịrị ogbo; adaba njem na-adaba adaba kewa uzo abuo, na ntaneti nke etiti a na ejikota ọla edo ngbachapu onwe ya na ejikota mmekorita.
Fatịlaịza Pellets oyi Machine Video Display
Fatịlaịza Pellets oyi Machine Model Nhọrọ
E nwere ọtụtụ ụdị Fatịlaịza Pellets Jụrụ igwe, nke enwere ike ịhọrọ dika ezigbo mkpa, ma ọ bụ ahaziri ahazi. E gosipụtara isi teknụzụ ndị na-esonụ na tebụl ：
Nke gara aga: Rotary Single Cylinder Ihicha igwe na Nhazi Fatịlaịza
Osote: Rotary Fatịlaịza mkpuchi igwe